YEYINTNGE(CANADA): Saturday, April 23
500 fine each to thai girls for upper show( အသက်18 + သာကြည့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/23/20110အကြံပြုခြင်း
"ပြည်ပသတင်းဌာန၊ သတင်းသမားအများစုမှာ ဒေါက်တာနေဝင်းမောင်၏ တပည့်များဖြစ်နေ"
ပြည်ပသတင်းဌာနတွေ ဘာ့ကြောင့် ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်နဲ့ Myanmar Egress က အန္တရာယ်ကြီးမှန်း သိရက်နဲ့ နှာစေးနေကြတာလဲ။ စစ်အစိုးရဖြစ်စေချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းကို နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့ အဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာယူပြီး အကောင်အထည် ဖော်ပေးနေတဲ့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်နဲ့ Myanmar Egress ဟာ တိုင်းပြည်မှာ အန္တရာယ်အလွန်ကြီးမှန်း သိပေမယ့်။ BBC. VOA. RAF. DVB. Irrawaddy. Mizzima သတင်းဌာနတွေဟာ သူတို့အကြောင်း သေချာစုံစမ်း သတင်းရေးသားတာ မလုပ်ဘဲ နှာစေးနေကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာ့ကြောင့်လည်း ဆိုရင်တော့ အဲဒီသတင်းဌာနတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေသူ တော်တော်များများဟာ နေ၀င်းမောင်တပည့်တွေချည်းဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နေ၀င်းမောင်ဟာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ကျော်ကျော်ကတည်းက သူ့ရဲ့ တပည့်တွေကို နိုင်ငံခြား တက္ကသိုလ်တွေကိုပို့ ပြီးရင် RFA.VOA စတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာ အလုပ်လုပ်ခိုင်း။ နောက်ပိုင်း တပည့်တွေကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် Irrawaddy. Mizzima သတင်းဌာနတွေမှာ အလုပ်လုပ်ခိုင်း။ ဟိုသတင်းဌာနတွေကလည်း နေ၀င်းမောင်တပည့်တွေကို အလုပ်ခန့်ထား။ နေ၀င်းမောင်တပည့်တွေက နေရာယူပြီး သူတိုဆရာရဲ့ မကောင်းကြောင်းသတင်းဆိုရင် နှာစေးနေပါတယ်။ အတိအကျ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ RFA သတင်းဌာနမှာ နေ၀င်းမောင်ရဲ့ တပည့် ကျော်ကျော်အောင်၊ အခု မေစောမြင့်လို့ နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ The Voice သတင်းထောက် ထားထားမြင့်၊ ဧရာဝတီသတင်းဌာနမှာ ခက်ထန်လို့ နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ The Voice သတင်းထောက် ဖုန်းမြင့်ဦး၊ ခင်ဦးသာလို့ နာမည်ပြောင်းထားတဲ့ The Voice သတင်းထောက် ခင်ဌေးကြွယ်၊ Mizzima သတင်းဌာနရဲ့ အယ်ဒီတာ စိန်ဝင်းကတော့ The voice ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ကျော်မင်းဆွေနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားမှာ သင်တန်းသုံးလ အတူတူတက်ခဲ့ပြီး ထွန်းထွန်းလို့ခေါ်တဲ့သူကတော့ The Voice ဂျာနယ်က ကွန်ပြူတာ စာစီစာရိုက် အောင်ထွန်းလင်းပါ။
နေ၀င်းမောင်ဟာ ဒီလူတွေ ပြည်ပ အခြေစိုက် မြန်မာသတင်းဌာနတွေကို မရောက်ရောက်အောင် အတင်းပို့ပြီး သူ့လုပ်ရပ်တွေကို ပြည်ပသတင်းဌာနတွေက နှာစေးနေဖို့ ကြိုတင်အကွက်ချ စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ The Voice ဂျာနယ်က အယ်ဒီတာတွေ၊ သတင်းထောက်တွေဟာလည်း ပြည်ပမီဒီယာတွေရဲ့ Correspondant တွေဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ တစ်ဦးချင်းနာမည်တော့ မပြောတော့ပါဘူး။ နေ၀င်းမောင်ဟာ Myanmar Egress Media Centre ကို တည်ထောင်ထားပြီးတော့ သတင်းထောက် အယောက် ၂၀ လောက်ခန့်ထားကာ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ သတင်း မှန်သမျှကို ထောက်လှန်းရေး သဖွယ် စုစောင်း။ အစိုးရထောက်လှန်းရေးကို ပေးသင့်တာပေး၊ အတိုက်အခံတွေကြားက အကွဲအပြဲသတင်းဆိုရင်လည်း ပြည်ပရောက်နေတဲ့ သူ့တပည့်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး အရင်ဦးအောင်ပို့ အတိုက်အခံတွေပျိုကွဲအောင်လုပ်နေပါတယ်။
အဲဒီတော့ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေ အနေနဲ့ရော၊ အဲဒီသတင်းဌာနတွေ ရောက်နေတဲ့ နေ၀င်းမောင်တပည့် တွေရော ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာကိုယ်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြစေချင်ပါတယ်။
ကမ်းမမြင် သင်္ဘောသားဘ၀ ဖြစ်ချင်လို့လာဘ်ငွေတွေ ပေးဆောင်နေရပါ၏
ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲတယ့် အချက်တွေထဲမှာလူနည်းစုသာသိတယ့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားသဘောင်္သားတွေကို စီစစ်တယ်ဆိုတဲ့ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနသည်မည်သူ့ကိုမျှတိုင်လို့မရ။ကျွန်တော်တို့သဘောင်္ထွက်ခါနီး အထွက်သတင်းပို့၇င်တောင် သူတို့ပြောတဲ့စည်းကမ်းကြီးကြပ်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ကြီးချမ်းမြေ့ဆိုတဲ့ သူကI.T.Fဆိုတဲ့သဘောင်္သားတွေအတွက်ကမ္ဘာကနေ လုပ်ပေးထားတဲ့ သဘောင်္းသားအခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ အဖွဲ့ကြီးကိုမတိုင်တန်းရန်နှင့်တိုင်တန်းကြားခဲ့၇င်လဲ ကျွန်တော်တို့ပြန်ေ၇ာင်၇င် တိုင်ကြားသူအနေဖြင့် သဘောင်္လိုက်ခွင့်ကို အရေးယူဆောင်၇ွက်မှုလုပ်ကြတယ်၊
အဆိုးဝါးဆုံး နောက်တချက်က 10% ဆိုတဲ့အမြတ်တော်ခွန်ဆောင်တာကိုပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်စ်ပို့ သက်တမ်းပြန်တိုးရင်ပုံစံ(၁၇)ဆိုတဲ့ အခွန်ကင်း၇ှင်းကြောင်း ပုံစံစာ၇ွက်ကို ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီး၇ုံးမှာသွားထုတ်၇င် အခြား၊အိမ်၊ကားပစ္စည်းတွေအပေါ်မှာအခွန်ဆောင်ရမည်ဟုခြိမ်းခြောက်ပါသည်။ အနည်းဆုံးသဘောင်္သားတယောက်ကို (၂)သောင်းမှနေပြီး (၂)သိန်းကျပ်ထိ အခွန်ဦးစီးကို ပေးဆောင်မှ ပုံစံ(၁၇) ကိုထုတ်ပေးပါသည်။
နောက်အဆိုးဝါးဆုံးထဲမှ အဆိုးဆုံး ကတော့လက်၇ှိရေကြောင်းဦးစီးဌာနမှ စက်မှုဌာနမှာ၇ှိသည့် ညွှန်မှူး၊ ဒု-ညွှန်မှူး တွေဟာကျွန်တော်တို့(၄၆)လမ်း ၊အပေါ်ဘလောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံေ၇ကြောင်းပညာအသင်း ဆိုပြီး
3-engineer စာမေးပွဲကျူ၇ှင်တွေကို (၁)ဆိုတဲ့ အခကြေးငွေတွေကို ယူပြီး စာသင်နေကြပါတယ်။ ပြီးတော့လည်းပဲ စာမေးပွဲတွေကို စစ်ဆေးတဲ့နေရာ မှာလည်း မေးခွန်းတွေကို မဲနှိုက်တယ်ဆိုတဲ့ စနစ်ကြီးနဲ့ ပညာ၇ပ်ဆိုင်ရာ ပုံစံမဟုတ်ပဲ ၊မြန်မာထီပေါက်စဉ်ဂဏာန်းလည့်သလို မျိုးပုံစံဖြစ်နေတော့ သဘောင်္သားတွေ၇ဲ့ နောင်လာမဲ့ new generation တွေဟာဘာမှမသိကြပါ၊ ။ ညွှန်မှူး တွေဆီမှာ ၀ိုင်းလုပ်ပေးနေတဲ့ ရုံးစေ၊ကားဒ၇ိုက်ဘာ၊ရုံးစာရေး မစတဲ့
ပွဲစားပေါင်စုံခံပြီး ညွှန်မှူး တွေထဲက..ဦး......................ဆိုတဲ့ ဒုညွှန်မှူး 3-engineer စာမေးပွဲအောင်ဖို့ (၂၅) သိန်းတိတိပေးချေရင် အောင်တယ်ဆိုတဲ့ ပညတ်ချက်ကြီးပုံစံမျိုးထုံးစံလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သတင်းမီဒီယာမှ တစ်ဆင့်
မြန်မာ စားတာကမ္ဘာသိအောင် ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းက ပြည်တွင်းကနေပြီး ပို့ ပေးတဲ့အကြောင်းတွေ ပါဗျာ
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဆယ်နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်
ဘင်္ဂလာဒေရှ့်ရခိုင့် အရေး ကယ်မည့် သူဝေး
(၂၄ /၀၄/၂၀၁၁/ နံက် ၇ နာရီ ) ဘင်္ဂလာဒေရှ့် နိုင်ငံ ဖလံတောင် ဒေသ၌ ရခိုင်နှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်ပွါးခ့ဲသော ကုလားရခိုင် အဓိကရုဏ်းတွင် ပထမဆုံး ရင်ဂွါမြို့ နယ် ဘိုရိုးဗီးလာရွာတွင် ကုလားလူမျိုး သုံးဦးသေဆုံး ပြီးသည်နှင့် ဇာတ်လီယာရွာ ကားလမ်းမ ခွဆုံတွင် နေထိုင်လျက် ရှိနေသော ကုလားများမှာ တရားဥပဒေ အရဖြေရှင်းရန် မကြိုးစားပဲ ဘာသာရေးအစွန်းရောက် တစ်စု၏ လှုံဆော်မှုကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ရင်နင့် ဖွယ်ရာဖြစ်ပေါ်ခဲပါတော့ သည်
အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနာရီပိုင်းအကွာဇာတ်လီယာရွာမှBNPပါတီခေါင်းဆောင်ချာဇာဟန်း၅၃နှစ် (ယခုဘင်္ဂလာဒေရှ့် နိုင်ငံအတိုက်အခံပါတီဝင်) မာချုမ်း ၄၅ နှစ် အာလာဦးဒိန် ၃၈ နှစ် အီဗြာဟိမ်း ၄၂ နှစ် မီလောင်း(န်) ၃၅ နှစ် ဘာချား ၃၀ နှစ် တို့ ခြောက်ယောက် ဦးဆောင်လျက် နောက်ပါကုလား ၂၀ ကျော်တို့ သည် )ဓါး တုတ် လက်နက်စသည်များ ကိုင်ဆောင်လျှက် ဘာသာရေးဟစ်အော်သံများနှင့် အတူ ဇာတ်လီယာရွာအနီးရှိ မိုင်ကီလိုမီတာဝက် ဝေးကွာသော ပိုထာစာရာရွာတွင်းသို့နေ့ လည် နှစ်နာရီခန့် အချိန်တွင် ယင်းရွာမှ ဦးလှဖြူ ၅၀ နှစ် နေအိမ်အား ဝင်ရောက်ခါ မီးရှို့ လုယက်ပါတော့သည် မီးရှို့ ရာတွင် စပါးမောင်း (၈၀)ဆနွင်း ၅ မောင်း နှင့် မျိုးစေ့ ဆနွင်း ၂၅ မောင်း ရွှေ တစ်ကျပ် လုယူသွားပြီး ယင်းမှတစ်ဆင့် ၎င်းရွာတွင် အချမ်းသာဆုံး မောင်နိုမဟောင်း ၇၀ နှစ် (သက်အမျိုးသား)တွင် စပါး (၁၀၀)မောင်း ရွှေနှစ်ကျပ် မြေးငယ်စားရန် ဈေးမှဝယ်ယူခဲ့သော ပေါက်ပေါက်(၁၀ kg) ကာလာဒေါင်း ၄၇နှစ် (သက်အမျိုးသား) ထံမှ စပါး (၁၄)မောင်း မောင်မောင် မာရမာ ၅၀နှစ်ထံမှ ဆန်(၂၀ kg)ပေါက်တူး ဓါး ပေါက်ဆိမ် တူရွင်းနှင့် ကောင်ဂို ၄၃ နှစ်(သက်အမျိုးသား)မဆန်(၅၀ kg)ှ ပါထိုးရ်မူနိ ၃၅နှစ် (သက်အမျိုးသား)မှဆန်(၃၀ kg) ဘီဒူးနီ ၆၈နှစ် (သက်အမျိုးသမီး မုဆိုးမ)ထံမှ ဆန်(၅ kg)များ အိမ် စုစုပေါင်း ရှစ်ဆောင် ပြကျခဲပြီး ငွေစက္ကူ (တာကာသုံးသောင်း)နှင့်ကောက်ပဲသီးနှံ စိုက်ခင်းများကိုပါ ဖျက်ဆီးကာ ခုဆိုရင် ဝတ်စရာ စားစရာ မရှိတဲ့အတွက် မီးမရှို့ ပဲကျန်ခဲသော ရွာသားများ ဝေပေးသမျှ ထမင်းများကိုစား နေရပြီး ညမှောင်တာနဲ့ ခွေးဟောင်ရင် ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ညလုံးပေါက် တောတောင်ထဲမှာ ထိုင်ရင်းမိုးလင်းတာ ၆ ညရှိပါပြီ စစ်သားတွေက ဈေးကိုလည်း ထွက်ခွင့် မပြုဘူး ဒီလိုဘယ်နှစ်ရက် နေရအုန်းမှလည်း ကယ်မည့်သူဝေးပြီဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ ရွာသားတစ်ဦးမှ ကျွန်တော်တို့ လူ့ အခွင့် ရေးသို့ ဖုန်းဖြင့့် ပြောကြားပါသည် ၄င်းနေ့ တွင်ပင် ဇာတ်လီယာရွာ ကားလမ်းဆုံတွင် Polish box (check post )ရှေ့ ၌ မိုဖီးဇ် ၄၂နှစ် (လက်ရှိအစိုးရပါတီဝင် jubo lick)မာမုန်း (baker koylum shamiti အလုပ်လက်မဲ့ တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ )နှင် လဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ချမ်းမချူးတို့ ခေါင်းဆောင်ပြီး လာသမျှကားများကို ဆီးတားကာ ဟေ့ မျိုးခြားတွေကို ဆွဲချကြ ငါတို့ ကုလားတွေကိုသတ်လို့ သေပြီ ဒင်းတို့ ကိုလက်စားချေကြ အလာလ်ဟူးအက်ဘာရ် ကြွေးကြော်ပြီး ဓါး တုတ်များဖြင့်လူမဆန်စွာ ဝိုင်းရ်ျ နေ့လည် တစ်နာရီခန့် အချိန်တွင် သတ်ကြပါတော့ သည် ဟု ဈေးဝယ်လာသူများအဆိုအရသိရပါသည် စာရေးသူမှ ယင်းနေရာတွင် ရဲများရှိနေတယ် မတားကြဘူးလားဟုမေးရာ သူတို့ နှင့် ဘာမှမဆိုင်သလို လက်ပိုက်ကြည့် နေ ကြတယ်ဟု ၄င်းမှဆက်ပြောပါသည် ကားတစ်စီးပေါ်တွင် chittagong polytechnic college ကျောင်းသား တစ်ဦး ဖြစ်သူ အာရှိခ် စာက်မာ ၂၀နှစ် ( အဖဘီဂနို စာက်မာ ရင်္ဂါမတီ (သက်ထောင်) ခရိုင် ဘာဂိတ်ဆိုရီ မြို့ နယ် ဘာလူခါလီ ရွာနေ) မှ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် အဖဖြစ်သူအား အဖေ သားဇတ်လီယာရွာ ခွဆုံကားပေါ်မှာ အခြေအနေမကောင်းဘူး ရှေ့က ကားတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေကို ကုလားတွေကားပေါ်မှ အတင်းဆွဲချပီးသတ်နေတယ် ကျွန်တော်တို့ ကားပေါ်မှာလည်း germens မှာ လုပ်တဲ အလုပ့်သမား ရှစ်ယောက်ပါတယ်အဖေ ပြောပြီး အော်သံများကြားရပြီးနောက် ဒီနေ့ ထိ သားပေါ်မလာတော့ ဘူး ဟု စာေ၇းသူကို ငိုသံဖြင် ဖုန်းထဲမှ့ပြောပြပါသည် အခင်းဖြစ်ပွါးပြီး ညနေ ၄ နာရီခန့် တွင် ဘိုရိုဘီလာရွာတွင် သေဆုံးသွားသော ကုလားအလောင်းကိုဇာတ်လီယာရွာ ခွဆုံသို့ ယူပြီး ဆန္ဒပြကြပါတယ်ဟု NGO တစ်ခုမှ အမှထမ်းတဦးမှ ပြောပါသည် ၎င်းမှကားလမ်းဘေးမှာ သေနေတဲ ရခိုင်လူမျိုးအပါအဝင် အလောင်းတွေ ၁၅ လောင်းလောက်ကို ကားလမ်းအောက်မှာ ပုံထားတာ တွေ့ နေရကြောင်း ဆန္ဒပြလူအုပ်ကြီးမှာ တဖြေးဖြေး ကြီးမားလာပြီး လော်စပီကာများတပ်ဆင်ကာ လူမျိုးရေး ထိခိုက်စေသော စကားများဖြင့် တရားဟောကြကြောင်းနှင့်ကားတန်းရှည်ကြီးလည်း ယာဉ်ပိတ်ဆို့ မှု ဖြစ်နေကြောင်း လူအုပ်ကြီးမှာ ရှေသို့ ချီတက်သွာပြီး ဘာတွေဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မမြင်ရတော့ ပါဘူးဟုဆိုပါသည် အလောင်းပုံထားသော နေရာမှ ည (၈) နာရီကျော်တွင် သတိရကာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် လာသူတစ်ဦး၏ ညီဖြစ်သူအား စာရေးသူမှဆက်သွယ် ကြည့် ရာ စိတ်အနည်းငယ် ဖေါက်နေကြောင်း အိမ်တွင်းပုန်း ဆေးကုသခံယူနေရလို့ နောက်ကျမ္မာရေး ကောင်းမှဆက်သွယ်ရန် ၎င်းကဆိုပါသည် ဇာတ်လီယာရွာအလွန် ဂွီးမားရွာ High school မှ အမည်မဖေါ်လိုသူ ကျောင်းဆရာ တစ်ဦးမှ ပထမ အစမ်းစာမေးပွဲစပြီ ၄ တန်းမှ ၁၀ တန်းထိ အားလုံးကျောင်းသား/သူ ၁၁၃၅ ယောက်ရှိပါတယ် ကုလားကျောင်းသား (၈၀) လောက် ရောက်ရှိဖြေဆိုကြတယ် ရခိုင်နှင့် တခြားလူမျိုးတွေ ကြောက်လို့ ဖြေဆိုရန်မလာကြောင်း မိဘအုပ်ထိမ်းသူ များလည်းဈေးဝယ်ရန် မလာသည့် အတွက် အလွန်အခက်တွေ့ နေရကြောင်း ၎င်းမှပြောပြပါသည် ယခုစာရေးနေစဉ် ဒီနေ့ ကုလားတွေ စုပြီးဆန္ဒပြနိုင်ဖွယ် ရှိသည်ဟု ဆောင်းခေါ်လာရွာ(မီးလောင်စဉ် ၂ ဦးသေသောရွာ)မှ အမည်မဖေါ်လိုသူ (ဇာတိ ကျောက်တော်မြို့ ) တစ်ဦးကပြောပါသည် ဆက်ပြီး အခင်းဖြစ်သည့် နေမှ သူတို့ ရွာတွင် အိမ် ၃၃ ဆောင် ပြကျကာ ယင်းနယ်တဝိုက်တွင် အများဆုံးအထိခိုက် ခံရသောရွာဖြစ်ပြီး ဘာမှမဆိုင်ဘူးလေဗျာ ဖြစ်တဲ့ နေရာနှင့်ဒီရွာနှင့် ၅ မိုင်လောက်ဝေးတယ် ဒီအနားက ကုလားတွေကို စစ်တပ်မှ လူမျိုးရေးအရ သွေးထိုးကူညီပြီး တမင်အနိုင်ကျင့် ဖျက်ဆီးတာပါ ၄ ရက် အယင်က လူကြီးတွေ ဆန် ၅ ပြည် ပဲ 1 kg ဆားအနည်းငယ် ပေးပြီးပြန်သွားကြတယ် ပုဂ္ဂလိက လှူမည့် သူတွေ ဂွီးမားရွာဈေးကို ရောက်ကြတယ် စစ်တပ်ကဝင်ခွင့် မပေးဘူး ကျုပ်တို့ ရိက္ခာပြတ်ပြီး သေရတော့ မယ်ထင်တယ်ဗျာ ပျက်စီးသွားတဲ့စာရင်းတွေ နံမည်တွေ အတိအကျ ဒီနေ့ ပို့ ပါမယ်ဟုဖုန်းဆက်ပြောပြပါသည် (အနိုင်နိုင်ငံရောက် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များ ဤအဖြစ်ဆိုးများကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသူများကို လူသားချင်း စာနာထောက်ထား၍ လှူဒါန်း ကူညီမည်ဆိုပါက ကျွန်တော်တို့ နှင့် ဆက်သွယ်ပါရန် လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်)
စိုးလင်းထွန်း (လူ့ အခွင့် အရေးနှင့် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်း စောင့် ရှောက်ရေးအဖွဲ့ )
ဘဏ္ဍာရေးမှုး 0088 01720453861
500 fine each to thai girls for upper show( အသက်18...
"ပြည်ပသတင်းဌာန၊ သတင်းသမားအများစုမှာ ဒေါက်တာနေဝင်းေ...
ကမ်းမမြင် သင်္ဘောသားဘ၀ ဖြစ်ချင်လို့လာဘ်ငွေတွေ ပေးေ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဆယ်နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား...